Mansur Yavaş’tan Esenboğa Metrosu Açıklaması - RayHaber
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီEsenboga Metro ထံမှ Mansur ကရှင်းပြသည်နှေးကွေး
Esenboga Metro ထံမှ Mansur ကရှင်းပြသည်နှေးကွေး
28 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Metro, တူရကီ 0
Mansur Yavaş၏Esenboğa Metro ဖော်ပြချက် - Ankara မြို့ပြမြူနီစီပယ်ကောင်စီတွင်ကျင်းပသောအစည်းအဝေးတွင်ပြောကြားရာတွင် Mansur Yavaş၊ Ankara Esenboğaလေဆိပ်သည်မြို့လယ်မှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက် metro စီမံကိန်းအတွက်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အားစဉ်အတွင်း 15 ဇူလိုင်လလခြမ်းဆင်တူတွေနဲ့ Esenboga လေဆိပ်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အကြားမြေအောက်ရထားစီမံကိန်းကအနှေးနှစ်ထပ်လိမ့်မည်ကတိပြု, အကောင်အထည်ဖော်ဘို့လိုအပ်ဘတ်ဂျက်များကိုစီမံကိန်းများကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကြွေးနှင့်အတူနောက်ဆုံးဆွေးနွေးပွဲတွေကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်ပေးသောငွေချေးနှင့်အတူဆွေးနွေးပွဲများအတွက်သင့်လျော်သောအဆိုပြုချက်, သူမကပြောသည်နှေးနှင့်အတူဂျပန်ကုမ္ပဏီများနေဆဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆွေးနွေးပွဲကပြောသည်; "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Metro စီမံကိန်းဆိုက်မှတစ်ဆင့် Pursaklar အတွက်ဇူလိုင်လ 15 လခြမ်းနီအမျိုးသား Will ရင်ပြင်မှစတင်ပြပွဲအာကာသ, လေဆိပ်များနှင့်လှံတံညှနျကွားရလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင့ဆန္ဒရှိကျနော်တို့ကဖြစ်ပျက်လုပ်ရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ လေဆိပ်ဖို့မြေအောက်ရထားများအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ထောက်ခံမှုရှိလိမ့်မည်လို့ပဲ။ ငါတို့သည်လည်းသူ့အဘို့အဓိကအားအဲဒီမှာဖြေရှင်းချင်တယ်။ ဤတွင်ကျွန်တော်ပိုက်ဆံဖြုန်း, ငါတို့အကြွေးဝယ်ရတဲ့လိမ့်မည်, ကျနော်တို့အရှည်ဆုံးယူဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်, ဈေးအပေါဆုံးကုန်ပစ္စည်းများအတွက်Ankaralılarဖြစ်လိမ့်မည်။ "(T24)
ကနေတူရကီမှ Mansur ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားကိုနှေးကွေးစေ .. ''5တစ်နှစ်နေဖြင့် Metro Duplicate ပါလိမ့်မယ် '' 22 / 04 / 2019 တူရကီမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Mansoor အနှေး, ယဉျကြေးလည်ပတ်မှုဆက်လက်။ အနှေးကိုသမ္မတဗီယင်နာလက်ထောက်မြို့တော်ဝန်Aslıhan Bozatem, တူရကီဥပဒေကျောင်း Alumni အစည်းအရုံးကသမ္မတနှင့်အတူ Hak-ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Mahmut Arslan နှင့်ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပါသည်, အမေရိကန်သံရုံးယာယီသံရုံး Jeffry အမ် Hoveni ရန်, နောက်ဆုံး, ဂျပန်သံအမတ်ကြီး Akio Miyasei အခွင့်အာဏာဧည့်သည်များဧည့်ခံ လျှပ်စီး Aka နှင့်သူ၏ပူးတွဲကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုသဘောတူညီခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်နှင့်ပြည်ပမှာသွားရောက်လည်ပတ်နေတဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းများအတွက်ပြင်းထန်စွာအလုပ်လုပ်သုံးစွဲရသောအနှေးအမေရိကန်အစိုးရ, နှေးနှေးကနေသမ္မတ၏သတင်းစကားကိုဂုဏ်ယူပါတယ်, အမေရိကန်သံရုံးယာယီသံရုံးအာဏာပိုင်များ Hovenier သွားရန်သဘောတူညီခဲ့သည်။ အမေရိကန်အစိုးရ၏နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ congratulatory မက်ဆေ့ခ်ျများနှေးကွေး ...
အဖြေ TCDD ကနေတဖြည်းဖြည်း လာ. , 24 / 06 / 2013 အဖြေ Mahir နှေး TCDD အဖြေအားဖြင့်တူရကီပြည်နယ်မီးရထား TCDD အဆင့်ကိုဖြတ်၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုဖို့စာတစ်စောင်ထုတ်ပေးဘို့ TCDD Polatlıမြူနီစီပယ်ကနေဆန့်ကျင်ဘက်ဖြည်းဖြည်း လာ. အထွေထွေမန်နေဂျာထံမှလာ၏။ သူကကြေညာချက်မှာနှေးကွေးက "နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ General Manager ကိုငါ့ conveys Writing, အထွေထွေမန်နေဂျာSüleyman Bey ငါ၏အ.İletiလမ်းတိုက်ခန်းဥက္ကဋ္ဌ Selahattin Sivrikaya သို့မဟုတ်ပို့နေတဲ့တုန့်ပြန်မရခဲ့ပေ။ ငါတော်တော်များများအခါသမယအပေါ်အတွင်းရေးမှူးတစ်ဦးမှတ်ချက်ကျန်ရစ်ပေမယ့်မိုဘိုင်းဖုန်းနောက်ကျောမှ texted ဖူး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Selahattin အတွင်းရေးမှူး၏ FDI လမ်းတိုက်ခန်း Sivrikaya ဦးနှောက်ရှာဖွေရန်ဟုပြောသည်။ Selahattin Bey အဆင့်ကူးကြောင်းကျင်းပသောစဉ်ဆက်မပြတ်အစည်းအဝေး, မက်ဆေ့ခ်ျကိုကြည့်, ပထမဦးဆုံးဖြစ်ခြင်းများအတွက်တောင်းပန်မှပြန်မရဖွင့်ဖို့သိပ်နောက်ကျခဲ့ပါတယ် ...
IMM, ကျော်ကြားတေးရေးဆရာမြို့လိုင်းကူးတို့၏နာမကိုမှတဖြည်းဖြည်း Alaeddin နေထိုင်ခဲ့ 14 / 10 / 2018 အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, နာမည်ကျော်တေးရေးဆရာများနှင့်အနုပညာရှင်ပါမောက္ခပြည်နယ် ဒေါက်တာ Alaeddin ဖြည်းဖြည်း Vapuru အတွက်စီးတီးလိုင်း၏နာမကိုငါပေးမည်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ညီလာခံအောက်တိုဘာလအတွက်၎င်း၏ပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့တယ်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင်ပြည်နယ်၏ကျော်ကြားတေးရေးဆရာများနှင့်အနုပညာရှင်, ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Alaeddin တဖြည်းဖြည်းနဲ့စီးတီးလိုင်း၏နာမတော် Vapuru အတွက်အလားအလာဖြစ်ဖို့အဆိုပြုချက်ကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ တူရကီလေယာဉ်ကိုနေထိုင်ဂီတကမ်းလှမ်းချက် IMM ညီလာခံ, နာမည်ကျော်တေးရေးဆရာများနှင့်အနုပညာရှင်ပါမောက္ခပြည်နယ်ရှုမြင် ဒေါက်တာ Alaeddin တဖြည်းဖြည်းနဲ့Hatları'nınတညီတညွတ်တည်းအတည်ပြုခဲ့ခဲ့မြို့ပိုင်မီးသင်္ဘောပေးရန်အတွက် IMM လက်အောက်ခံအဆိုပြုချက်ကို၏အမည်။ ထို့ကြောင့်လေယာဉ်များ၏တဦးတည်း၏အမည်ကိုဖြည်းဖြည်းနှစ်ခုတိုက်ကြီးအကြားတစ်ဦးချင်းစီနေ့, ခရီးသည်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏တူရကီဂီတနထေိုငျ ...
100 နှင့်အတူ Mansur နှေးနေ့ 31 / 07 / 2019 တူရကီမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Mansoor နှေးသူ, ဧပြီလ 8 ထံမှမြို့နယ်မှကောက်ယူအားလုံးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်လေ့လာမှုများစတင်လုပ်ကိုင် "100 Mansur နှေးနေ့ရက်များနှင့်အတူ" စာအုပ်ငယ်အတွက်ကိုပြောသည်။ စည်ပင်သာယာ၏ transparent နားလည်မှုတင်ဒါ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခွင့်ပြု, ရှိသမျှယူနစ်အတွက်သူတို့ရဲ့အသက်တာကိုဖြုန်း, အနှေးဥက္ကဋ္ဌတိုက်နယ်ဟာခြိုးခြံခြွေတာရေးဆောင်ရွက်ချက်များတဦးတည်းကိုထည့်လေ့မရှိ, အားလုံး၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများ၏မြို့တော်မြူနီစီပယ်အများပြည်သူတို့ရှေ့မှာခြေလှမ်းအဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအားဖြင့်ခြေလှမ်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်စတင်ခဲ့သည်။ မြူနီစီပယ်သူမကမည်မျှသုံးစွဲဘယ်မှာ? "အရာအားလုံးနိုင်ငံသားများများ၏ရှေ့မှောက်၌ဖြစ်လိမ့်မယ်" ဟုနိုင်ငံတော်သမ္မတနှေးကလည်း, မြှို့နယ်ရဲ့လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အပေါ် 60-စာမျက်နှာစာအုပ်စီမံကိန်းများကိုယခင်ကာလများစွာကိုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၏ကွပ်မျက်မှတက်, သူတို့ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအခွအေနေသတင်းပို့ ...
မြို့တော်က Metro, အလခြမ်းနီ Esenboga လိုင်းတင်ဒါထွက်လှည့် 23 / 07 / 2012 ပို့ဆောင်ရေး၏မြို့တော်န်ကြီးဌာနအတွက်မြေအောက်ရထား၏ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပြီးနောက်အသစ်တခုရထားလမ်းစနစ်လာမည့်ရက်သတ္တပတ်နူးညံ့မထွက်။ အသစ်ရထားလမ်းစနစ်ကတူရကီ Esenboga လေဆိပ်မှာအတွက်လခြမ်းနီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ Esenboga လေဆိပ်မှာရထားစနစ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အချို့စီမံကိန်းများကိုလမ်းကြောင်းသုံးစွဲဖို့ရာနုပြီးနောက်ဖြစ်စေထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်လုပ်ပေးရန်။ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန, မသာသူကိုလည်းပြုမိစီစဉ်ထားစီမံကိန်းများကိုသည်ထင်ရှားဘယ်မှာတူရကီအတွက်မပြီးဆုံးသေးသောမြေအောက်ရထားစီမံကိန်းက။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်တွင်ဝန်ကြီးဌာနတင်ဒါလာမည့်တစ်ပတ် Esenboga လေဆိပ်မှာရထားစနစ်များအပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ နုသတ်မှတ်ထားသောခံရဖို့မြို့လယ်နှင့်အတူတူရကီ Esenboga လေဆိပ်မှာအကြားစီမံကိန်းရထားလမ်းစနစ်ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ နူးညံ့သောအရည်အချင်းများလက်မှတ်များလယ်ကွင်း 15 ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ...
အဆိုပါ Sivas အမြင့်မြန်နှုန်းရထားခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းလှုံ့ဆော်
ကနေတူရကီမှ Mansur ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားကိုနှေးကွေးစေ .. ''5တစ်နှစ်နေဖြင့် Metro Duplicate ပါလိမ့်မယ် ''
အဖြေ TCDD ကနေတဖြည်းဖြည်း လာ. ,
IMM, ကျော်ကြားတေးရေးဆရာမြို့လိုင်းကူးတို့၏နာမကိုမှတဖြည်းဖြည်း Alaeddin နေထိုင်ခဲ့
မြို့တော်က Metro, အလခြမ်းနီ Esenboga လိုင်းတင်ဒါထွက်လှည့်
Esenboga Metro ပွဲခင်းတိုးချဲ့
Esenboga လေဆိပ်မှာ Metro နူးညံ့သောနေ့ရေတွက်နေသည်
တူရကီ Esenboga လေဆိပ်မှာ Metro 2022 Bitte ပါလိမ့်မယ်
တူရကီ Esenboga ယခုနှစ် Metro Quit ဖို့တင်ဒါကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏စောင့်ဆိုင်း